Wararkii Ugu Dambeeyey Ee Dalka Afghanistan – somalilandtoday.com
Wararkii Ugu Dambeeyey Ee Dalka Afghanistan
Ciidamo aad u hubeysan oo ka tirsan Taliban ayaa isku ballaadhiyey magaalada, waxaana qaarkood ay ku sugan yihiin madaxtooyada.
“Taliban waa ay guuleysteen, waxayna hadda mas’uul ka yihiin sharafta, hantida iyo dhowridda walaalahood,” ayuu Ghani ku yidhi bayaan uu soo dhigay faecbook.
“Waxay iminka wajahayaan tijaabo kale oo taariikhi ah. Ama waxay joogteyn doonaan magaca iyo sharafta Afghanistan, ama waxay ahmiyad siin doonaan meelo kale iyo shabakado,” ayuu yidhi.
Ghani ma uusan shaacin halka uu u cararay, hase yeeshee warbaahinta ugu weyn Afghanistan ee Tolo ayaa sheegtay inuu aaday dalka Tajikistan